China Hotel Kuchengeta Trolley vagadziri uye vatengesi |VOSHON
Foldable Utility Cart, Rolling Cart with 4 Wheels, Ngoro dzekutengera dzezvigirosari, Durable Heavy Duty Telescoping Collapsible Storage Bin for Travel Shopping Kufambisa Mitoro Kushandisa Hofisi.
Item Weight 6.5 Pondo
Yepamusoro Hunhu Zvishandiso: Iyo inopengeka utility ngoro yakagadzirwa neyekutanga yakasimba yakasimba zvakatipoteredza inoshamwaridzana ABS kesi ine ngura-proof aluminium alloy mubato (yakasimba uye yakareruka), inogona zvakare kuidhonza yakachinjika, yakachengeteka uye yakavimbika.
Yakawedzera Yakasimba Kurodha: Iyi ngoro yekutenga inozokwanisa kumira nehuremu hwemutoro kupfuura mamwe magirosari.Kana crate yakavhurwa, zviyero zvayo zvemukati ndeye 15.7 * 15.3 * 13 inches kune yakawanda nzvimbo yekuchengetera, kukwana i55L.Iyo base inogona kutsigira kusvika ku140 lbs uye chivharo chinogona kutsigira kusvika ku295 lbs.
Universal Wheels & Rear Wheel Break System: Ngoro inotenderedzwa ine 4 inobviswa 360 ° inotenderera isina ruzha mavhiri, nyore kushandura nzira kana yashandiswa.Uye mavhiri mana ane bhatani rebhureki anogona kudzivirira chidhori kutsvedza kana chikasashandiswa.Pfeka uye kumanikidza kuramba mavhiri erabha, ari nyore kukungurukira pane chero mugwagwa, chengetedza hupenyu hurefu.
Foldable & Adjustable Handle: Iyi ngoro yegirosari ine mavhiri inopeta pasi kusvika chete 3 ″ gobvu kuitira compact chengetedzo iri nyore kukwana mumotokari chero ipi zvayo kana wadhiropu, inorema isingasviki 6.5-mapaundi.Inogadziriswa mubato unogona kusvika kune 2 hurefu hwakasiyana hwekutonga uye inodzoreredza chengetedzo iri nyore.Kana mubato wacho wawedzerwa zvizere, kureba kwechigadzirwa ndeye 35.8 inches zvakazara.
Multifunctional Use: Iyo yekuenda ngoro haina kungokodzera chero chekufambisa kubva kumagirosari uye giya rekumisasa.Yakakodzerawo masutukesi, mvura yemubhodhoro, midziyo yemitambo, zvinhu zvegadheni, midziyo yemahombekombe & zvekushandisa mukicheni, zvevadzidzisi zvekirasi.Izvi zvinogona kushandiswa kutakura, kutenga, kufamba, kutakura chengetedzo, uye pekugara.
Zvakapfuura: Mini inopeta ngoro yekutakura
Zvinotevera: Kupeta kutenga Trolley
Cheap hotera mukamuri simbi kuchenesa imba ...
Wholesale Restaurant service Multifunction hotera...
China fekitari hotera simbi inorema basa guru mbichana...
Chitororo chekuchengetedza imba muhotela